Sinocare unamava eminyaka eli-19 kushishino lwe-BGM ukusukela oko yasekwa ngo-2002, yeyona nkampani inkulu yokuvelisa i-BGM e-Asiya kunye nenkampani yokuqala yemitha yeglucose e-China, ezinikezela kuphuhliso lwetekhnoloji ye-biosensor, ukuphuhlisa, ukuvelisa kunye nentengiso ngokukhawuleza iimveliso zovavanyo lokuchonga. Ngo-2016, emva kokufunyanwa ngempumelelo kweNipro diagnostic Inc. (ngoku ebizwa ngokuba yiTrividia Health Inc.) kunye nePTS Diagnostics Inc. umhlaba.
Ngokubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo kubantu abanesifo seswekile kunye nezinye izifo ezinganyangekiyo ukubanceda baphucule ubomi babo.
Ingcali ekhokelayo kulawulo lweswekile e-China nakwingcali ye-BGM emhlabeni.
Ukunikezelwa kwe “2020 China Best Employer Enterprises Award”
Kufunyenwe isatifikethi sobhaliso lwezixhobo zonyango kunye nokuvunywa kwemveliso ngo-2004. Kupasiswe i-ISO: 13485 ye-EU TUV kwaye yafumana isatifikethi se-CE ngo-2007.
UKWAMKELWA KWILIZWE LONKE
Uluhlu lweForbes njengenye yeenkampani ezingama-200 zaseAsia “ezona ziPhantsi kweBhiliyoni” kwi-2015 njengeyona ndawo inkulu yokuvelisa iBGMS eAsia.
Ufumene ishishini lesithandathu leemitha zeswekile yegazi. Ungene kwinkampu ekhokelayo ye-BGMS emhlabeni.
ISinocare Lu Valley Biosensor Imveliso yeZiko ebekwe e-Changsha kaZwelonke yoPhuculo lwezoBuchwephesha kuMmandla woPhuculo lwasungulwa ngo-2013. Malunga ne-66,000 m2 yendawo egqibeleleyo, umzi-mveliso wethu uyilenkqubo inkulu yokubeka esweni i-Blood Glucose Monitoring (BGMS) e-Asia.
Ishishini lethu ligubungela amazwe ali-135 kunye nemimandla esehlabathini.
Ngaphezulu kwesabelo se-63% se-OTC kunye neekhemesti ezingama-130,000 e-China.
Iimveliso zethu zibandakanya iswekile yegazi, i-lipids yegazi, i-ketone yegazi, i-hemoglobin eglycosylated (HbA1c), i-uric acid kunye nezinye izikhombisi zeswekile.
Njengenye yeeprojekthi zokubonisa iNkqubo kaZwelonke yoBunjineli boBunjineli boBunjineli, iSinocare ifumene inkxaso-mali kwiNgxowa-mali kaZwelonke yokuPhucula izihlandlo ezininzi, kwaye yapasa i-ISO: isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho kunye nesatifikethi se-European CE ngo-13485.
INGCALI YOLAWULO LWEZESWELE
Kule minyaka ili-15 idlulileyo, iinkqubo zethu zokubeka esweni ezichanekileyo, ezifikelelekayo, kunye nokulula ukusebenzisa ziye zamkelwa kakuhle ngawo onke amacandelo abathengi e-China, ngaphezulu kwe-50% yesifo seswekile esizijongayo sabantu besebenzisa iimveliso zeSinocare. Singazingca ukuba sifundise ngempumelelo kwaye sakhuthaza ukubekwa esweni kweglucose yegazi kubantu abanesifo seswekile e-China.
Nangona kunjalo, ukuba nenkqubo yokujonga eswekile yegazi linyathelo lokuqala kuphela. Ukufezekisa injongo yokulawula inqanaba leswekile yegazi ngokufanelekileyo, abantu abanesifo seswekile kufuneka bafunde ukuvavanya iswekile yegazi, ukuvavanya nini, ukuvavanya kangaphi, kunye nokwenza ntoni nedatha. Ngaphandle koko, ukutya kunye nokuzilolonga kuchaphazela njani inqanaba leswekile yegazi nganye ekufuneka ithathelwe ingqalelo njengenxalenye yokulingana. Ukunceda abantu abanesifo seswekile ukuba baqonde yonke imiba ebalulekileyo yolawulo lweswekile ehambelana ngokupheleleyo nenjongo yethu, "Ukusuka kwiGazi leGlucose Meter Promotor ukuya kwiNgcali yoLawulo lweSwekile".
Le njongo ikhuthaza wonke umntu eSinocare: sihambise iinkqubo zokujonga iswekile yegazi ngobuchwephesha obuphambili, siphuhlise abahlalutyi abahlalutyi ukubonelela ngolwazi oluthe kratya malunga nesifo seswekile, siphuhlise iqonga lolawulo lwesifo seswekile esibhedlele ukuvala iluphu phakathi koogqirha, abaguli, abagqirha bokutya , kunye nabahlohli beswekile. Ekugqibeleni, siza kwenza i-eco-system yolawulo lweswekile kwaye sinike isisombululo sokuphucula umgangatho wobomi kubantu abanesifo seswekile, ukwenza lula ukusebenzisana phakathi kwabanikezeli bezempilo kunye nezigulana, kunye nokuphucula uqoqosho kwezoluntu lwethu.